प्रचण्ड कमरेड गरीबको घरमा पुग्न सक्यौ भने मात्र...
प्रचण्ड कमरेड गरीबको घरमा पुग्न सक्यौ भने मात्र…
३ चैत्र २०७५, आईतवार २०:१४
कुनै एक युगका युग नायक जसले कलिलै उमेरमा जनताको वर्गी समानताको लागि जनयुद्धको शंखघोष मात्र गरेन वर्तमान राज्यसत्ताबाट पिछडिएका, हेपिएका, गरीविको रेखामुनि आश्रित, विभेद र असमनताको जन्जिरभित्र कष्टकर जीवन गुजार्न बाध्य जनताहरुलाई गोलबन्द गर्दै गाउँबाट शहर केन्द्रित आन्दोलनको आधिवेरी ल्यायो ।
दुरदराजमा अत्यन्तै कष्टकर जीवन भोगिरहेका मानिसहरु माओवादीले बाँडेका सपना र आश्वासनले सजिलै माओवादी आन्दोलनमा हातेमालो गर्दै मर्न र मार्न तयार भए ।
माओवादी आन्दोलनले जनताको राजनैतिक चेतनाको मात्र विकास गरेन साथसाथै आफ्नो अधिकारको लागि जुनसुकै त्याग र बलिदान गर्न पनि प्रेरित गर्यो । कयौं युवायुवतीहरु कलम र कापी च्यातेर बन्दुक समाउन पुगे कतिले जागीर, परिवार र आफन्त त्यागेर विचार र बन्दुक चलाउन पुगे ।
नेतृत्वले देखाएको हिम्मत र सपनाहरूले लाखौं जनताहरु राज्यको दमन ,धरपकड र मृत्युको प्रवाह नगरी नेतृत्वले सिकाएको र घोकाएको वर्गीय युद्दमा एकाकार भए । कयौं सहादत भए । कयौंको कोख रित्तियो ।
कसैको सहारा चुडियो । कोहि अपांग भए । धेरैको परिवार भत्कियो । भाईचारा टुट्यो । साँच्चै नेतृत्वले देखाएका सपनाहरूको पहाड कति मनमोहक र गुलियो थियो । तर जनताको त्यो निस्वार्थ साहस ,त्याग, बलिदानी र क्षतिले सिर्जित बाह्र बुदे सहमति हुँदै देशमा संविधानसभा र गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पक्कै पनि राजनैतिक ब्यबस्था परिवर्तन भयो ।
महिला , जनजाति , दलित एबम पिछडिएका समुदायले केही हिस्सा अधिकार र समावेशिता त पाए तर समग्रतामा गणतन्त्र आएको १०,११ वर्षमा जनताको जीवनस्तरमा के कति सुधार भयो ? के रेमिटान्सले बनेका केही नयाँ घर, हातमा खेलाईएका केही थान मोबाइल , घरका भित्तामा लागेका टिभी र बाटोमा गुडेका केही जोर मोटरसाइकल नै गणतन्त्रको प्राप्ति हो त ?
के यसलाई गणतन्त्रको सफलताको मापन मान्न सकिएला ? के प्रचण्ड , उनको परिवार , केही दर्जन नेता र उनिहरुको आसे पासेहरुको जीवन बदलिनु र सम्पन्न हुनुलाइ नै गणतन्त्रको सफलता मान्न सकिएला ?
प्रचण्ड कमरेड , एक पटक युद्धमा आफ्नो परिवार गुमाएका, अझैपनी शरीरमा छर्रा बोकेर बाँचिरहेका, घाइते , अपांग र तपाईंले देखाएको सपनालाई सिरानी हालेर सुत्ने गरीबको घरघरमा पुग्न सक्यौ भने मात्र तिम्रो महानता मानिने छ । तरकारी बारीमा डोजर चलाउने किसानको घरमा राहत बनेर पुग्यौं भने मात्र तिमीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र सफल भएको मानिनेछ ।
दिन रात साहुको हलो जोतेर पनि दुई छाक खान नपुग्ने हलिको घरमा गाँस पुर्याउन सक्यौ भने मात्र हजारौं सहिदहरुको बलिदानको जित हुनेछ । तिम्रो सुरक्षार्थ ढाल बनेर बन्दुकको गोलि छातीमा थाप्न लालायित लाखौं विदेशिएका युबाहरुलाई स्वदेशमा नै फर्काउन सक्यौं भने मात्र प्रचण्ड सफल भएको ठानिनेछ ।
गाँस र बासको अभावमा खुला आकाशलाई आफ्नो छानो र मानो बनाएका हजारौं जनतालाई ओत लाग्ने बासको ब्याबस्था गर्न सक्यौ भने मात्र तिमीले जुगाको रेखी मुसार्दै गर्व गर्न पाउनेछौ ।
नत्र आफू , आफ्नो परिवार र केही दुर्गाबहादुर वा शारदाबहादुरहरुको जीवन समृद्ध हुदैमा न देश समृद्ध हुनेछ न त बैरी ले हानेको गोली जनताले आफ्नो छातीमा थाप्नेछन ।
अझैपनी समय छ कमरेड , आफ्ना दुई नातीहरुलाई सामान्य जीवन ज्युन पुग्ने बाहेक बाँकी सम्पत्ति जनतालाई फिर्ता गर्न सक्यौ भने न तातो पानीमा डुबुल्की पार्नु पर्ला न त सुकुटेतिरको कृत्रिम हावाको बेग्रतामा दौडिनु पर्नेछ ।
कमरेड, राजनैतिक परिवर्तनसंगै देशको आर्थिक ,सामाजिक र साँस्कृतिक परिबर्तन गर्न सक्यौ भने अब तिम्रो सुरक्षा ५९ जनाको बटालियनले हैन जनताले गर्नेछन । बैरीको गोली वा निसाना कहिल्यै तिम्रो छातीसम्म आईपुग्ने छैन । न त कसैले चार घन्टाको कार्यक्रम नै बनाएर तिम्रो मृत्युको आराधना गरोस तिमी युगौयुग बाँच्नेछौ ।
आजसम्म आफ्नो र आफ्नाहरुका निम्ति बाँच्यौ अब बाँकी जीवन देश र जनताका लागि बाँच्नु तब मात्र तिमी सुरक्ष्ँित महसुस गर्नेछौ । नत्र मृत्युको भयले तिमी दिनरात तड्पिरहनु पर्नेछ ।
पौडेल भमनपा वाड नं १३ निवासी हुनुहुन्छ